Huawei otu n'ime ụdị ndị na-etinye oge kachasị na R&D n'ụwa | Gam akporosis
Nyocha na mmepe dị mkpa na ụlọ ọrụ teknụzụ ugbu a, maka ndị na-emepụta ekwentị. Dị dịka Samsung na Huawei bụ ezigbo ihe atụ, na mmepe nke ekwentị mpịachi dị ka Galaxy Fold na Mate X nke ahụ ga-abịa n'oge adịghị anya. Ugbu a, egosiputa ego ole ụlọ ọrụ kachasị elu na-emefu na R&D, tinyere ụfọdụ ihe ịtụnanya na ya.
Ebe ọ bụ na ọ dịla mfe ịmata na ụdị dị ka Samsung na Huawei na-ekenye ego karịa nke a karịa ndị ọzọ dịka Apple. Nke kachasị mkpa bụ uto nke akara ndị China, ihe nke rụpụtarakwa ezigbo ahịa, ugbua kariri Apple na eze.
E bipụtara data a site na Bloomberg. Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị a si dị, Huawei ekenyela R&D ụfọdụ ijeri dollar 15,3 naanị afọ gara aga. Onu ogugu a di okpukpu abuo ihe ndi kompeni tinyere n’aho ise gara aga. N'ihi ya, ọ mụbara budata na obere oge. - Ihe sitere na ntinye ya na 5G, ihe na-enweghi nsogbu.
N'ụzọ dị otú a, na data nke afọ ndị na-adịbeghị anya, ika ahụ etinyelarị onwe ya dị ka ụlọ ọrụ nke asaa na mpaghara teknụzụ ị na-etinye ego kacha. Nke nta nke nta ọ na-abịaru ọkwa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Samsung. Na mgbakwunye na ị gafere Apple, ihe doro anya na-eme ka ike nke ụlọ ọrụ ahụ doo anya.
Ọzọkwa, Huawei na-agbasa nke nta nke nta na ngalaba ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na a na-atụ anya na a ga-enwe ọkà okwu amamihe nke ika ahụ, nke ga-apụta nbanye ya na ngalaba ụlọ. Mana n'ezie anyị ga-ahụ etu ngwaahịa si abata na mpaghara ọhụụ, nke na-enyere ọganihu ha aka.
Anyị ga-ahụ etu itinye ego nke ụlọ ọrụ ahụ si gbalite. Na mpaghara nke telephony, 5G na ekwentị foldable bụ abụọ n'ime isi ike Huawei taa. Anyị ga-ahụ n'ezie ka ọtụtụ akwụkwọ akụkọ si dị na ngalaba a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Samsung na Huawei ụdị ndị na-emefu ego na R&D
Kalịnda Google na-abanye otu nhọrọ nke ngwa kachasị ebudatara